Mpianatra valo voasambotra, nisy koa ny naratra Lakrimozena, herisetra teny Vontovorona | NewsMada
Nitohy teny Vontovorona, nandritra ny fihetsiketsehana nataon’ny mpianatry ny politeknika ny ramatahora sy ny famoretana ataon’ny fanjakana amin’ny alalan’ny fampiasana ny mpitandro filaminana. Ankoatra ny grenady lakrimozena niraradraraka, nisy mihitsy ny fikasihan-tanana sy ny fisamborana.
Raikitra indray ny savorovoro teny amin’ny sekoly ambony politeknika, omaly maraina. Nanomboka tamin’ny 9 ora maraina, taorian’ny fivoriana nataon’ny mpianatra, nidina nivoaka ny faritry ny oniversite izy ireo sady nametraka sakana amin’ny lalana mihazo an’Alakamisy Fenoarivo. Nisy koa fandorana kodiarana toy ny miseho mahazatra amin’ny hetsika ataon’ny mpianatra rehefa manao fitakiana. Niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana rehefa nihamaro ny sakana ka nanelingelina ny fifamezivezena teny an-toerana. Nandefa baoma mandatsa-dranomaso ny mpitandro filaminana nanaparitahana ny mpianatra mpitokona ka rava ihany ny hetsika.
Zavatra roa ny anton’ny hetsika omaly, araka ny fanazavan’ny talen’ny sekoly ambony politeknika,Vontovorona, Andrianaharison Yvon Dieudonné. Nisy lalàna nivoaka momba ny famerana ny isan’ny mpianatra azon’ny mpampianatra raisina an-tanana amin’ny “encadrement”, mandritra ny fikarakarana “mémoire”. Noferana ho efatra ho an’ny mpampianatra iray ka manahy ny mpianatra sasany fa tsy ho voaray ny ankamaroan’izy ireo. Tsy nisy fifanatonana teo amin’ny mpiandraikitra ny departemanta sy ny mpianatra ao amin’ny M2 ka nitarika amin’ny savorovoro. Misy ny vahaolana “co-encadrement” azo atao tsara manoloana ny toe-javatra tahaka izany fa tsy ampy ny fifampiresahana ho an’ny departemanta isanisany sy ny mpianatra ka nitarika amin’ny fanehoan-kevitra ivelan’ny faritry ny oniversite. Antony faharoa ny fitakiana ho amin’ny fampiakarana ny vatsim-pianarana ho an’ny mpianatra izay iraisan’ny fakiolte sy ny sekoly ambony rehetra miankina amin’ny fanjakana.
Misy ambadika hafa ny fitakiana
Ny zava-misy tsapanay, misy olona efa mpamatsy kodiarana, hazo sy vatobe eny Vontovorona. Raha vao raikitra ny savorovoro, mivoaka vetivety avokoa ireo akora ireo, ohatra ny miandry baiko fotsiny. Manahy ny mpitantana ny sekoly ambony fa tsy fitakiana fotsiny ny anton’ny hetsika fa miharo zavatra hafa.
Nambaran’ny mpianatra kosa fa ankoatra ny fitakiana ny fampiakarana ny vatsim-pianarana sy ny fitakian’ny mpampianatra mpikaroka, anton’ny hetsika koa ny tokony hijeren’ny fanjakana ny fotodrafitrasa sy ny fitaovam-pampianarana satria efa mihatra ny rafitra LMD. Momba ny famerana ny isan’ny mpianatra azon’ny mpampianatra raisina, ny mpianatra M2 manomana “mémoire”, efa ho 800 amin’izao fotoana izao ary mitombo isan-taona ny isa. Tokony ho tany amin’ny L1 no efa noferana ny isan’ny mpianatra noraisna fa tsy rehefa tonga any amin’ny M2, ampy hisahana azy ireo ny mpampianatra. Ho an’ny “département telecommunication”, ohatra, 82 ny isan’ny mpianatra, valo ny mpampianatra “maître de conference” afaka mandray an-tanana azy ireo.
Misy mpianatra tsy maintsy hiandry taona maromaro aty aoriana vao mety hahazo mpampianatra “encadreur”. Mandra-piandry izay, hanao inona ary izy ireny? “Hitohy ny fitakiana mandra-pahazo valiny mahafa-po”, hoy ny nambaran’ny solontenan’ny mpianatra eny Vontovorona, omaly.